यी ४ राशिका मानिसलाई अम्बेको माताको पूर्ण आशीर्वाद, धन सम्पत्तिमा अथाह वृद्धि ! - Mitho Khabar
April 29, 2022 mithokhabarLeaveaComment on यी ४ राशिका मानिसलाई अम्बेको माताको पूर्ण आशीर्वाद, धन सम्पत्तिमा अथाह वृद्धि !
चैत्र महिना सुरु भएसँगै सबैजना नवरात्रीको पर्खाइमा बस्छन् । चैत्र शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिमा नवरात्रि मनाइन्छ । यसपटक नवरात्रि २ अप्रिलबाट सुरु हुँदैछ । तिनीहरू अप्रिल 10 मा समाप्त हुनेछन्। यस नौ दिनमा माता दुर्गाका ९ रूपको पूजा गरिन्छ । जानौं यो पटकको नवरात्र कुन राशिका मानिसका लागि विशेष रहने छ ।
वृष राशिः ज्योतिषशास्त्र अनुसार वृष राशिका लागि नवरात्र विशेष रहनेछ । यस राशिका व्यक्तिहरुलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक स्थिति पहिलेको भन्दा धेरै सुधार हुनेछ। यति मात्र होइन, माँ अम्बेले हरेक काममा पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्, साथसाथै कार्यस्थलमा पनि कोही ठूलो हुन सक्छन् । यो दिन व्यवसायीहरुका लागि पनि शुभ समाचार ल्याउन सक्छ ।
कर्कट: माता रानीको कृपाले कर्कट राशिका व्यक्तिको सबै मनोकामना यी दिनमा पूरा हुनसक्छ। तपाईको मिहिनेतले पूरा फल दिनेछ। जो कोहीले यात्रा गर्न सक्छन् र यस समयमा तिनीहरू यात्राबाट पैसा कमाउन सक्षम हुनेछन्। तपाईको सबै मनोकामना पूरा हुनेछन्। अदालती मामिलामा सफलता मिल्नेछ । धन सम्पतिमा वृद्धि हुनेछ ।
सिंह: नवरात्रिमा सिंह राशिका लागि धन योग बनिरहेको छ। अचानक धन प्राप्ति हुनसक्छ । यस अवधिमा धेरै कामहरू पूरा गर्न सकिन्छ। यात्राबाट धन आर्जनमा सफलता मिल्नेछ । साथै यस अवधिमा कुनै पुरानो रोगबाट मुक्ति मिल्ने सम्भावना रहेको छ । विदेश जाने सम्भावना पनि छ । जागिरमा पदोन्नति पाउन सकिनेछ ।
तुला: तुला राशिका लागि यो नवरात्र विशेष हुन सक्छ। आर्थिक जीवनमा स्वर्णिम सफलता मिल्नेछ । सुविधामा वृद्धि हुने सम्भावना छ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। धन आर्जनका नयाँ बाटो खुल्नेछन् । एकभन्दा बढी माध्यमबाट धन आर्जनमा सफलता मिल्नेछ।